ကိုယ်တိုင်မောင်းနေတဲ့ သဘောင်္ပေါ်ကို လိုက်ခဲ့ဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်တဲ့ ယွန်းယွန်း - Myanmarload
ကိုယ်တိုင်မောင်းနေတဲ့ သဘောင်္ပေါ်ကို လိုက်ခဲ့ဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်တဲ့ ယွန်းယွန်း
လွန်ခဲ့သော ၈ လ က 10:55 September 10, 2019
ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော် သရုပ်ဆောင်ယွန်းယွန်းကတော့ ငယ်စဉ်ကတည်းက ပရိသတ်တွေရဲ့ တခဲနက်အားပေးဝန်းရံမှုတွေကို အပြည့်အဝရရှိထားသူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပီပြင်ပိုင်နိုင်တဲ့ သရုပ်ဆောင်ကောင်းမှုတွေကြောင့် အကယ်ဒမီထူးချွန်ဆုတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့ သူမကတော့ ပညာရေးဘက်မှာလည်း ထူးချွန်သူလေးဖြစ်သလို အားကစားနဲ့ ခရီးသွားခြင်းတွေကိုလည်း မကြာခဏပြုလုပ်တက်သူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Photos credit - Yoon Yoon's FB Acount
ပညာရေးနဲ့ အနုပညာအလုပ်တွေကို ခွဲခြားထားသူတစ်ယောက်ဖြစ်သလို ဝါသနာပါရာတိုင်းကိုလည်း ထူးထူးချွန်ချွန်လုပ်ဆောင်နိုင်သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ယွန်းယွန်းကတော့ မနေ့က ဧရာဝတီမြစ်မှာ သဘောၤစီးရင်း ပရိသတ်တွေကို အမှတ်တရဓာတ်ပုံနဲ့ လိုက်ပါစီးနင်းဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။
အဆိုပါ သဘောၤစီးရာမှာလည်း ယာဉ်မောင်းရာစက်အခန်းထဲအထိသွားရောက်ခဲ့ပြီး ကိုယ်တိုင်လေ့လာမောင်းနှင်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာကိုလည်း သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘွက်စာမျက်နှာပေါ်တွင် ပြသထားပါတယ်။ ယွန်းယွန်းကတော့ သူမချစ်ပရိသတ်တွေကို ဓာတ်ပုံတွေနဲ့အတူ " မသိဘူး.. သင်္ဘောတွေကိုယ်တိုင်တက်မောင်းနေပြီ!! စီးရဲရင် လိုက်ခဲ့ပါ " ဟူ၍လည်း ရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ်။ ကလေးဘဝကတည်းက ပရိသတ်တွေချစ်ခဲ့ရတဲ့ ယွန်းယွန်ရဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။